Kulesi sifundo, sizonikeza imininingwane ngesingeniso sesikole saseJalimane, amakilasi amaJalimane, amagama okufundela, ngamanye amagama, iminyango yesikole saseJalimane. Izigaba zesikole saseJalimane ngokuvamile zimi kanje. Sizonikeza isikhundla sethu kuqala ngokubonwayo. Ngemuva kwalokho sizonikeza uhlu olubhaliwe lweminyango yesikole ngesiJalimane.
I-laboratory yamakhemikhali yaseJalimane
Igumbi lothisha baseJalimane
Ingadi yesikole yaseJalimane
Ilebhu ye-biology yaseJalimane
Igumbi lamakhompyutha laseJalimane
Umtapo wolwazi waseJalimane
Ilebhu ye-physics yaseJalimane
Iminyango yezikole zaseJalimane
die Bibliothek: Umtapo Wezincwadi
der Schulhof: Ingadi yesikole
der Computerraum: Igumbi lekhompyutha
das Chemielabor: i-chemistry lab
I-das Physiklabor: Ilebhu yePhysics
das Biologielabor: Ibhayoloji ye-Biology
das Lehrerzimmer: Igumbi lothisha
die Sporthalle: Ijimi
# Iminyango yezikole zaseJalimane
Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Lesi sihloko osifundayo sabhalwa okokuqala cishe ezinyangeni eziyi-8 ezedlule, ngoMashi 27, 2021, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngo-Ephreli 20, 2021.
Izinto Zesikole SaseJalimane (Die Schulsachen)